‘पूजा’का लागि भन्दै किन लगिँदैछ किशोरीहरू भारत? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘पूजा’का लागि भन्दै किन लगिँदैछ किशोरीहरू भारत?
मोरङ लेटाङ नगरपालिका-३ की २२ वर्षीया मनिका ढकाल सुनसरी रामधुनी नगरपालिका-५ झुम्कामा डेरा गरी बस्थिन्।उनी झुम्का बजारमा तरकारी व्यापार गर्थिन्। तर, लकडाउनयता उनको तरकारी व्यापार चौपट्ट भएको थियो।सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका-५ का २८ वर्षीय सुमितकुमार मण्डलसँग उनको तीन वर्षदेखिको चिनजान थियो। उनीहरू फेसबुकमार्फत् जोडिएका हुन्।
मेसेन्जरमा कुराकानीकै सिलसिलाबाट सुरू भएको सम्बन्धले दुवैलाई भेटघाटसम्म पुर्‍यायो। सुमितकुमार र मनिका यदाकदा सुनसरीमा भेटघाट गर्थे।आपत पर्दा मनिका सुमितलाई गुहार्थिन्। सुमितले घरीघरी पैसा दिएर सहयोग गर्ने गरेका थिए।मनिकालाई लकडाउनका कारण व्यापार प्रभावित भएपछि त्यस्तै ‘आपत’ आइलाग्यो। उनले सुमितलाई पैसा दिएर सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्।
सुमितले आफूसँग पनि पैसा नरहेको तर, एउटा काम गरे पैसा पाइने भनेर मनिकालाई प्रस्ताव राखे- भारतको एउटा मन्दिरमा पूजा छ, त्यहाँ गएबापत् पैसा पाइन्छ।मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार सुमितले पहिला मनिकालाई नै उक्त ‘पूजा’मा सहभागी गराउन खोजे।
मनिकालाई आफ्नो उचाइ नाप्न लगाए। उनको उचाइ पुगेन। त्यसपछि सुमितले त्यति नै उचाइ भएकी अर्की युवती खोज्न अह्राए।अब मनिका त्यस्तो उचाइकी, शरीरमा चोटपटक नभएकी युवतीको खोजीमा लागिन्।